I-Pisces Ox: Umphathi wamandla afihliweyo we-Chinese Western Zodiac - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana I-Pisces Ox: Umphathi wamandla afihliweyo we-Chinese Western Zodiac
Abantu basePisces babhiyozela imihla yabo yokuzalwa phakathi kukaFebruwari 19 ukuya kuMatshi 20.
Awunakuqonda ukuba avela phi amandla abo kodwa ikho ukuze wonke umntu abone.
Indoda yePisces Ox iya kukutshayela iinyawo zakho ungakhange uyiqonde.
Ngeetalente ezininzi ezingafunyaniswanga kunye nokomoya kakhulu, kuninzi okunokufundwa ngumfazi wePisces Ox.
I-Pisces Ox ibonakala iboleka ezona mpawu zibalaseleyo ze-Ox kunye nawo onke amandla kunye nomonde wePisces onakho. Lo mntu uneentloni kwaye uyindlela yokwenza izinto, ebonisa umntu osebenza nzima enemigaqo emihle, ngakumbi xa kufikwa kwizigqibo ezinkulu ebomini.
Bayanyamezelana kwaye ngamanye amaxesha banciphe ngokweemvakalelo, aba bantu baya kuba secaleni kwakho xa ufuna kakhulu, nangona bengazukuba bakuxinanise ngamandla abo.
Ubuntu beTisid Pisces Ox
Iipisces ezalwe ngonyaka we-Ox zinobuhlobo kwaye zivulekile. Abantu kwiPisces unyaka we-Ox bathatha ixesha lokwenza abahlobo, nangona kunjalo. Bakhetha ukungabinabahlobo abaninzi. Baneentloni kancinci, kodwa xa bezimisele ukwenza into banokuthi bathathe isigqibo kwaye bathathe ngqo.
Isengqiqweni, i-Pisces Ox ibona umhlaba njengoko unjalo. Akayi kutolika abantu kunye neemeko.
ungazi njani ukuba indoda ebukeleyo iyakuthanda
Akukho gumbi lokungaqondani komntu ozelwe kulo mqondiso. Xa bafuna ukwenza isigwebo, abantu bePisces Ox baxhomekeke kwithuku labo, eliphuhliswe kakhulu.
Bayazixhalabisa ngendlela abanesimilo ngayo nabakhuliswe kakuhle ngayo abo babangqongileyo, kwaye bayalingana kwaye bayasebenza. Abo bazalelwe kwiPisces Ox ngonyaka nabo bacinga nzulu kwaye bacwangcisiwe.
Iimpawu eziPhezulu: Ngokwemvelo, ngokuSebenzayo, kwiThuba elinokuLungelelaniswa.
Kuqhelekile ukufumana umntu wePisces Ox esebenza njengomchweli okanye njengomkroli. Aba bantu bahle kakhulu ekusebenzeni ngesandla kunye nokusebenza.
Ababaleki ekusebenzeni nzima kwaye banengqeqesho engadibananga nayo kwezinye iimpawu zodiac.
Umntu osebenza kunye nePisces Ox okanye ilungu losapho liya kulungisa izinto kwindawo yokusebenzela okanye endlwini. Andinamdla wokuba sisityebi, aba bantu baya kwenza imali eyoneleyo ukuze baphile ubomi obutofotofo, obukhululekileyo.
Bayakuthanda ukuba seluxolweni kwaye baya kujikeleza phakathi kwabantu kunye nezinto abanokubanceda bagcine indawo ezolileyo.
Banikela ingqalelo enkulu kwikhaya labo. IiPisces zivuya kakhulu xa zisekhaya, ngelixa i-Ox iziva ikhuselekile kule ndawo.
Ukutsalwa yimiceli mngeni emitsha ebomini, iPisces kunyaka we-Ox abantu abasayi kucinga kakhulu ngempumelelo esele bayifumene.
Amaxesha amaninzi, i-Pisces Ox iya kuqhubeka nokuhlala nabazali bayo ngenxa yokuba bengenamdla wokuqhubeka kwaye kuba bayabucaphukela ubulolo.
Imisebenzi egqibeleleyo yePisces Ox: uLawulo, uMthetho, iMfundo, iBhanki kunye noKhuseleko.
Ekuphela kwento eyenza aba bantu babe sesichengeni kukuba neentloni. Abo bangabahlobo babo abachaphazeleka yile ngxaki, kodwa yenza kube nzima kubantu bePisces Ox ukuba basebenzise amathuba.
Abathandi ukuziphosa koko kunikelwa bubomi kuba abafuni ukuba seziko lokuqwalaselwa. Kufuneka bakhuthazwe ngakumbi.
Abantu abazalelwe ePisces unyaka we-Ox banomonde kwaye banyanisekile kwabo babathandayo. Xa uqala ukudibana nabo, usenokucinga ukuba banekratshi kuba abathethi, kodwa baneentloni kuphela.
Bafuna iqabane abanokumthemba ngokupheleleyo kwaye bazive bekhululekile, kwaye bathathe ixesha elide ukukhetha umntu oza kuhlala naye ubomi babo bonke. Banobumnini kwaye banokuba nomona ngokulula. Ukuthembana kubaluleke kakhulu kubo kubudlelwane.
Eyona ihambelana kakhulu ne: Taurus Rat, Scorpio Rat, Cancer Snake, Capricorn Snake, Scorpio Rooster.
Scorpio umfazi indlela yokutsala
Banovelwano kwaye bayathandana, aba bantu bakwindawo ephantsi kwaye banoxanduva. Kwaye balindele ukuba iqabane labo lifane. Inyaniso yokuba banengqiqo kwaye babakhathalele ibenza babe ngabazali abalungileyo.
Abantu bePisces Ox bahlala benobudlelwane obungenakwahlulwa kubuhlobo. Bayakuthanda ukuba nosapho, kodwa ngamanye amaxesha bayathandabuza, into enokwenza ukuba abo babangqongileyo benzakalise.
Baza kuzidina ngokuzama ukukholisa esinye isiqingatha. Kubalulekile ukuba iqabane labo libakhuthaze kwaye babathande ngalo lonke ixesha kuba bahlala bengazithembi ngokwaneleyo eluthandweni.
Umntu we-Pisces Ox uya kubona okona kulungileyo kuwe. Abaze babone iimpazamo zomntu. Yile nto ibenza babe ngamaqabane amangalisayo.
Banovelwano kwaye banothando oluya kwenza ukuba esinye isiqingatha sibonise imbeko. Umonde xa eceliwe, umntu wePisces Ox uya kuzola xa umntu ehlasela iqabane lakhe.
Iimpawu zePisces Ox yabasetyhini
Umfazi wePisces Ox uya kuphumelela nokuba akafuni. Uyayazi indlela yokoyisa iingxaki ngamandla ohlobo kwaye yiyo loo nto ekukhuleni kwakhe eya kuba ngumntu opheleleyo onemeko entle yemali.
Ngenxa yokuba womelele kwaye ulumkile, umfazi wePisces Ox uhlala etsala umdla omkhulu. Ngothando, eli nenekazi liqabane elimangalisayo elihlala lonakalisa isithandwa salo. Unako ukugcina imfihlo, esi sisizathu sokuba akwazi ukwakha ubudlelwane obomeleleyo obakhiwe ngokuthembana.
Uhlala engenabo ubudlelwane obuninzi ebomini bakhe kwaye ujonge ukutshata.
Okwasemoyeni, uxabisa isimilo njengokuziphatha kakuhle, ukuthembeka, kunye nesidima. Kumnandi ukuba nencoko nomfazi wePisces Ox. Uvulekile kwaye unolwazi kwaye yiyo loo nto enabahlobo abaninzi.
Kuyacetyiswa kuye ukuba ahlale ekhangela ukuziphucula. Kufuneka aqhubele phambili njengoko ukumisa kungazisa intlekele kuphela. Kufuneka abale ngaphambi kokuba athathe izigqibo.
pisces umfazi kunye nesagittarius uthando lomntu
Ngale ndlela, uya kuziva onelisekile. Umsebenzi ubaluleke kakhulu kumfazi wePisces Ox. Uya kuqhubela phambili ngokukhawuleza kwaye ngokulula, kodwa kuphela ngokunyaniseka.
Akajongi ukuzuza kwemali, ngakumbi ukoneliseka. Kwaye uhlala ephumelela ekufumaneni olwaneliseko kuba unobuchule.
Abantu abadumileyo phantsi komqondiso wePisces Ox: uKeira Knightley, uLarry Page, uJim Parsons, uHunter S Thompson.
Iimpawu zePisces Ox Man
Indoda yePisces Ox ngumntu onokuthembela kuye. Kunzima ukwenza lo mfo atshintshe ingqondo. Ezona mpawu zakhe ziphambili kukubonisa ubuthathaka nokuba sesichengeni. Abantu ngamanye amaxesha banokumtolika gwenxa.
i-aries man scorpio umfazi othandweni
Xa ekwisangqa sabahlobo bakhe, uyonwaba kwaye uyathetha. Yonke into ebalulekileyo kubudlelwane nendoda kwiPisces Ox yintlonipho, ukunyaniseka kunye nesidima.
Kuyacetyiswa ukuba aba bantu bangahoyi kakhulu xa begxekwa njengoko ukugxekwa kungasoloko kukhokelela kwiziphumo ezilungileyo kwaye banokwenza izigqibo ezingcono bebodwa.
Ngaphezulu koku, indoda yePisces Ox akufuneki yoyike ukuthatha iiklasi ezintsha okanye ukuyeka umsebenzi engasayithandiyo. Unetalente ezininzi ekufuneka ezivavanyile. Kukwindalo yakhe ukuyila nokucinga.
Uya kuba nakho ukufumana iziphumo ezintle ukuba ujolise kwiminqweno yakhe. Kubalulekile ukuba afumane into ayithandayo kwaye ayenze njengomsebenzi ngelixa eshiya ezinye iifowuni njengezinto zokuzonwabisa.
Inkokeli yokuzalwa yendalo, indoda yePisces Ox inamabhongo, inomdla, kwaye ngamanye amaxesha inethamsanqa. Unesibindi kwaye akanangxaki nokuba seziko lokuqwalaselwa kwimisitho. Ujolise kakhulu kwikhondo lakhe lomsebenzi.
Nge-5 kaSeptemba iZodiac yiVirgo-Ubuntu obupheleleyo beHososcope
Indoda yeLibra kunye neAries Umfazi ukuhambelana kwexesha elide
Uphawu lweZodiac ngoMatshi 10
I-scorpio venus indoda ethandanayo
Uphawu lweZodiac ngo-Okthobha 23
I-sagittarius ibhinqa kunye ne-leo eyindoda
xa indoda yegemini ikuthanda